Xildhibaan Carab oo dowladda Puntland u jeediyay in ay ceelal biyoodyo gaarsiiyo deegaan doorasheedkiisa – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdiraxmaan Diiriye Carab oo ka mid ah golaha wakiillada Puntland oo dhawrkii cisho ee u dambeeyay ku sugnaa deegaan doorasheedkiisa gobolka Cayn ayaa soo bandhigay baahida biyaha ee halkaas ka jirta.
Xildhibaanka ayaa soo bandhigay laba ceel oo muhiim u ahaa dadka tuulooyinka, xoola-leyda iyo xoolahaba, kuwaas oo labadii bilood ee ugu dambeeyay aan biyo laga cabin, cilado ku yimi darteed.
Ceelasha Jaban ayaa ku yaal degmada Buuhoodle iyo tuulada Xadhadhan 25 km dhinaca galbeed ka xigta degmada.
Mudane Carab wuxuu sheegay in ceelka tuulada Xadhadhan uu jaban yahay muddo sannad ah. Tuuladani waxay ka mid tahay meelaha uu seejiyay roobkii dayrtu, waxaana dadka iyo xoolahaba biyaha looga soo iibiyaa deegaano ceelal leh oo ka fog.
Xildhibaanka ayaa u jeediyay xukuumadda Puntland in ay xilweyn iska saarto ceelasha jiray ee jaban ee ay baahida u qabaan bulshadii manaafacaadsan jirtay oo awoodi waayay hagaajintooda.
Qoraal uu dadweynaha la wadaagay ayuu xildhibaanku ku sheegay in Puntland aysan weli ceelal biyoodyo ka hirgelin deegaanada gobolkaas “Waxaan rajo weyn ka qabnaa in Dawlada Puntland ceelal Biyoodo soo gadhsiiso Guud ahaan Gobolka Cayn gaar ahaan Degmoyinka aanay weli ka hirgelin wax ceelal biyood ah, sida Widhwidh” ayuu yiri Xildhibaan Carab.